चमत्कारी गुणले भरिएको यो बिरूवा, समस्या आउनभन्दा अगाडि नै दिन्छ यस्ताे संकेत – onlinedarpan:
Posted on November 19, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 118 Views
एजेन्सी । हाम्रो समाजमा हरेकका घर घरमा तुलसीको मठ र बिरुवा हुने गर्दछ । तर के तपाईलाई थाहा छ तमाम गुणले भरिएको तुलसीको बिरुवा कुन दिशामा हुनुपर्दछ ? सहि दिशामा तुलसी रोप्नाले यसले शुभ फल दिन्छ। तर गलत ठाउँमा रोप्नाले दोष पनि लाग्न सक्छ।
वास्तु अनुसार यस दिशामा रोप्नुहोस् तुलसी
तुलसीको बिरुवा भूलेर पनि दक्षिण दिशामा रोप्नु हुँदैन । पूर्वी दिशा तथा एकान्त ठाउँमा तुलसी रोप्नु वास्तु अनुसार सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ।
समस्या आउनुभन्दा पहिला नै तुलसीले सचेत गराउँछ
यदि तपाईको घरमा तुलसीको बिरुवा छ भने तपाईका आउने समस्या अगाडि नै तुलसीले सचेत गराउँछ। यदि तपाईको घरमा विपत्ति आउँदै छ भने घरमा रहेको तुलसीको बिरुवा सुक्न थाल्छ या रंग परिवर्तन भएजस्तो देखिन्छ।
यदि तपाईका सन्तान तपाईले भनेको मान्दैनन् भने तुलसीको बिरुवा पूवी दिशामा रोप्नु पर्दछ । र सोही तुलसीका ३ पात कुनैपनि तरिकाले खुवाएमा चमत्कारिक बदलाप देखिन्छ। जसका कारण तपाईका सन्तान तपाईले भनेको मान्न थाल्दछन्। ध्यान दिनुहोस् मंगलबार र आईतबार भने तुलसीको पात टिप्नु राम्रो हुँदैन।
यदि तपाईकी छोरीको विवाह हुन कठिन भएको छ र तपाई छोरीको विवाहको विषयमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईको समस्या अब समाधान हुनेछ।
विवाहयोग्य छोरीलाई दैनिक रुपमा तुलसीको विरुवामा जल चढाएर ५ पटकमा परिक्रमा गरेमा यो समस्या टाढा हुने गर्दछ । श्रद्धा एवं विश्वासका साथ यो उपाय अपनाउनाले तुलसीको कृपा प्राप्त हुने र शिघ्र विवाह सम्पन हुने विश्वास रहँदै आएको छ।
यदि कारोबारमा मन्दी लागेको छ भने तुलसीको बिरुवा पश्चिम दिशामा राख्नु पर्दछ । सोही तुलसीको बिरुवामा प्रत्येक दिन बिहान गाईको काँचो दुध मिठाई चढाउने गरेमा व्यापार चम्किन थाल्दछ।
यदि घरमा आएपछि सँधैजसो झगडा हुने गर्दछ भने यसबाट बँच्नका लागि आसपासमा तुलसीका गमला राख्नुपर्दछ । जसले तपाईको परिवारमा चमत्कारिक फाईदा मिल्ने गर्दछ।
यदि तपाईको घर कुनै प्रकारको वास्तु दोषबाट ग्रसित छ भने तुलसीको बिरुवा रोपेर पञ्चामृत चढाउँदै दैनिक रुपमा पूजाआजा गर्नुहोस्। यो उपाय तपाईका लागि रामवाण साबित हुनेछ भने वास्तुदोष पनि हटेर जाने छ।
Share16TweetGoogle+Pin016sharesहामीकहाँ मृगौलाको पत्थरीका विरामीकाे कमी छैन्, झन झन बढ्दै गएका छन् । पत्थरीको आकार केही साना हुन्छन् भने केही ठूला । सानो खालको पत्थरीलाई प्राकृतिक उपायमार्फत पिसाबबाट पनि निकाल्न सकिन्छ । हामी यस्ता खानेकुराकाेबारे वर्णन गर्दैछाैँ जसले पत्थरीबाट बचाउँछ । १. बेथेको साग मिर्गौलाको पत्थरी निकाल्नका लागि बेथेको साग उपयोगी मानिन्छ । यसका लागि आधा विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
यसरी चल्यो भाइटीका
Share57TweetGoogle+Pin057sharesपरापूर्वकालमा मृत्युका राजा यमराज बहिनी यमुनालाई भेट्न यमलोकबाट पृथ्वीमा लामो समय आएका थिएनन्। त्यसैले यमुनाले निम्ता दिएर दाजुलार्इ बोलाइन्, त्यो बेलामा यमपञ्चक परेको थियो। यमराज यमपञ्चकभर यमुनाको घरमा बसे । भाइटीकाको दिन यमुनाले दाजुलाई पूजा गरी उपहार दिएर दाजुसँग आशीर्वाद लिइन्। त्यहीबेलादेखि भाइटीका शुरु भएको विश्वास छ । भाइटीकालाई दाजुभाइसँग भेटघाट हुने, बिग्रेको सम्बन्ध सुधार विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…